Global Voices teny Malagasy » Inona no niseho tamin’ny Skype tany Shina? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Novambra 2018 7:16 GMT 1	 · Mpanoratra Frank Dai Nandika Liva Andriamanantena
Voalaza fa nosakanan'ny  China Telecom  ilay mpanome tolotra Aterineto (FAI) lehibe indrindra any Shina noho ny antony ara-toekarena, farafahakeliny tany amin'ny tanàndehibe atsimo atsinanan'i Shenzhen ny Skype , ilay programa VOIP  mahomby izay nahazo laza iraisam-pirenena no voasakana.
Niara-niasa tamin'ny Tom Online  ny Skype. Antsoina hoe Tom-Skype  ny Skype amin'ny endrika Shinoa notsorina. Ny anarana hoe “Skype-Out” no tena hamantarana ny Skype, izay hahafahan'ny mpisera miantso ny findain'ny hafa amin'ny feo mazava tsara.
Araka ny voalazan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Sina Tech , ny programa VOIP tahaka ny Skype dia tsy ara-dalàna  ao Shina satria ny orinasam-panjakana miisa enina ihany no nahazo alalana avy amin'ny Minisiteran'ny Farimbon'asa Fampahalalam-baovao , anisan'izany ny China Telecom, hampiasa ny programa tahaka izany. Ho voasakana ny Skype ao amin'ireo tanàndehibe tahaka an'i Beijing, Shanghai sy Shenzhen ary ny fanakanana ny fidiran'ireo mpisera amin'ny lohamilina  no dingana voalohany. Tsy mbola nanamafy izany tamin'ny fomba ofisialy ny China Telecom.
Nilaza ny tantaran'ilay mpisera Skype iray ao Shenzhen antsoina hoe Wang i Virushuo, izay nitatitra  fa tapaka ny fidirany tamin'ny aterineto ary nosakanana ny fanatsofoka [port] sasany. Nanontaniany ireo mpiasa tao amin'ny China Telecom, izay namaly fa nampidirina tao anaty lisitra mainty izy satria nampiasa Skype-Out ary nitaky valinteny avy aminy mba tsy hampiasa izany intsony izy ireo. Nampitandrina ihany koa izy ireo fa amin'ny manaraka dia hampandoavina lamandy mitentina 3000 Yuan izy, eo amin'ny 370 dolara Amerikana eo .
Nanamarika i Fons Tuinstra fa mbola manankery sy azo ampiasaina ny sehatra Skype iraisampirenena . Izay naniry hanana io sehatra io dia afaka nandefa mailaka tany aminy tao amin'ny tuinstranl#yahoo.com satria tena sarotra ny nahazo izany tao Shina. Nanondro pejy iray  amin'ny teny Shinoa ahafahan'ny olona mitroka ny Skype amin'ny teny Anglisy ihany koa i Lawrence Lee .
Nanadihady ny maha-ara-dalàna ny fanakanana ny Skype  i ZhangYizhen . Nomarihiny fa tsy nanome ny tolotra fanaovana antso VOIP mivantana ny Tom-Skype. Tsy maintsy mividy fahana avy amin'ny foiben'ny Skype any Soeda mba hampiasana ny PC2Phone ireo mpisera. Nilaza ihany koa izy fa mety tsy avy amin'ny foibe nasionalin'ny China Telecom fa avy amin'ny sampany Shenzhen ny fanapahan-kevitra tamin'ny fanakanana.
Niditra tao amin'ny OMC  i Shina ary nilaza fa manana ny toe-karena mifantoka amin'ny tsena  izy. Na izany aza anefa dia mbola misy ny karazana ampihimamba amin'ny endriny isankarazany izay ahafahan'ny orinasam-panjakana manana tombony tsy azo hiadian-kevitra amin'ireo mpifanandrina aminy amin'ny harena [fitaovana] sy ny politikan'ny governemanta. Tsy lamaody intsony ity karazana fifaninanana ity araka ny filazan'ny bilaogera iray , ” Voasakana ny Skype tao Shina fa tsy hanjavona  “
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/12/129780/
 Voalaza fa nosakanan'ny: http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20050911/wr_nm/telecoms_china_chinatelecom_dc
 China Telecom: http://www.chinatelecom.com.cn/english/
 Tom Online: http://www.tom.com/
 lahatsoratra iray tao amin'ny Sina Tech: http://tech.sina.com.cn/i/2005-09-08/0239714544.shtml
 Skype dia tsy ara-dalàna: http://www.skypejournal.com/blog/archives/2005/07/china_keeps_voi.php
 Minisiteran'ny Farimbon'asa Fampahalalam-baovao: http://www.mii.gov.cn/mii/
 fanakanana ny fidiran'ireo mpisera amin'ny lohamilina: http://www.zalbazone.com/blog/article.asp?id=30
 mbola manankery sy azo ampiasaina ny sehatra Skype iraisampirenena: http://www.chinaherald.net/2005/09/internet-wanne-have-international.html
 Nanondro pejy iray: http://soundaddict.typepad.com/blog/2005/09/the_skypeout_ba.html
 Nanadihady ny maha-ara-dalàna ny fanakanana ny Skype: http://www.earlzhang.com/lblog/article.asp?id=253
 toe-karena mifantoka amin'ny tsena: http://en.wikipedia.org/wiki/Market-oriented_economy
 Voasakana ny Skype tao Shina fa tsy hanjavona: http://ittbj.blogchina.com/2908776.html